Ensemble ဒီဇိုင်းများသည် BrightEye NXT 2.0 Routers များအတွက်ရောနှောခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ယူခြင်းကိုပြသသည် #NABShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » Ensemble Designs BrightEye NXT 2.0 router များ #NABShow သည်ရောစပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ယူရဖော်ပြပေး
မတ်လ 31, 2014 မြက်ချိုင့်, ကာလီဖိုးနီးယား - Ensemble Designs Compact router များကို၎င်း၏ BrightEye NXT လိုင်းဗားရှင်း 2.0 ဆော့ဖ်ဝဲ၏ NAB လွှတ်ပေးရန်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်များမရှိတာဝန်ခံမှာပေးအပ်ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်, Ensemble Designs BrightEye NXT ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း Switcher, အရည်ပျော်နှင့်တိုက်ရိုက်ယူအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေး HDMI အဖြစ်ကောင်းစွာ SDI သတင်းရင်းမြစ် TCP / IP ကိုသို့မဟုတ် DB9 connector ကိုမှတဆင့်ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုနှင့် configuration နှင့် salvo မှတ်ဉာဏ်မှတ်ပုံတင်အဖြစ်။ NXT 2.0 Las Vegas မှာ, ဧပြီ 7, 10 မှာဧပြီလ 2014 ထုတ်လွှင့်ပြသပါအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာပြသပါလိမ့်မည် Ensemble Designs တဲ N2524 ။
"ကျနော်တို့လမ်းကြောင်းဖို့လိုအပျနေတဲ့အထူးပြုကင်မရာများအတွက် Daytona 500 မှာရှစ်ယောက်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်း, switched ခဲ့ပြီးသောအချို့မှသုံးကင်မရာများဖြန့်ဝေ," က Jeff Silverman, Inertia Unlimited, အထူးပြုကင်မရာ provider ကသမ္မတကပြောပါတယ်။ "ဒီ Brighteye NXT Router program ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုဘယ်မှာရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
အသစ်ကို Safe ယာဉ်မောင်း Mode ကိုကားများနှင့်အခြားသေးငယ်တဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားထုတ်လွှင့်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်နှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းသည် router ရဲ့ရှေ့ panel ကိုအပေါ်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုပိတ်။
"အခုသငျသညျအကြားပျော်နိုင်ပါတယ် HDMI အရင်းအမြစ်, SDI သတင်းရင်းမြစ်, ဒါမှမဟုတ် SDI မဆိုပေါင်းစပ်နှင့် HDMI နှစ်ဦးစလုံးမှဆက်ကြောင်း, ကြို့ထိုးခြင်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဖန်သားပြင်မပါဘဲ HDMI နှင့် SDI နေရာများ, "Cindy Zuelsdorf, Marketing ကို Czar မှာကပြောပါတယ် Ensemble Designs။ "ဒါဟာကလပ်သားညှပ်ပေါင်မု၏အရွယ်အစားအကြောင်း box ကိုသုံးပြီးလယ်ကွင်းထဲကနေတိုက်ရိုက်ပြသ '' ရောထွေး '' ယခုဖြစ်နိုင်သောပါပဲ။ "
အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်အောက်၌ရှိသမျှသော BrightEye NXT ဖောက်သည်ရရှိနိုင် Ensemble Designs "ငါးနှစ်အရွယ်ဟာ့ဒ်ဝဲ, အသက်အဘို့အ software ကို" လူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ပစ္စည်းများအပေါ်အာမခံ။
"ဒီချိုမြိန်နည်းနည်း router ကိုဖြစ်စေသည် TCP / IP ကို ​​-RG45 သို့မဟုတ် DB9 မှတဆင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပြင်ပထိန်းချုပ်မှု protocol များကိုထောက်ပံ့ - အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ interfacing ခွင့်ပြု RS 232 ဆက်သွယ်မှု," ရောဘတ် Nunez မှာအရောင်းဆိုပါတယ် Ensemble Designs။ "ထိုအခါက, ယင်ကောင်အပေါ် Router က matrix ကို configurations ပြန်ခေါ် router ကို volley နှင့်အမြန်ဦးတည်ရာနှင့်အရင်းအမြစ်မှုကြီးကိုခွင့်ပြု - အားလုံးခလုတ်များ၏ထိတွေ့မှာ။ "
"ကျနော်တို့အာမခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ '' အသက်အဘို့အဆော့ဖျဝဲ 'ဖို့အပိုဆောင်းစရိတ်ကျေးဇူးတင်စကားမပါဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့် features တွေရောက်စေဖို့ဆက်လက်။ ဒါက BrightEye NXT များအတွက် software ကို၏ဒုတိယအဓိကဖြန့်ချိဒီနှစ်ဖြစ်ပြီး, ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကျိုးအတွက်အသီးအနှံကိုရိတ်ရ, "Monda Hott များအတွက်အရောင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် Ensemble Designs.
မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်နှင့် 1989 ဖွဲ့စည်း, Ensemble Designs ဆစ်ဂနယ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များဖြစ်သော CBS သတင်း, နာဆာဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘေ့စ်ဘော, အိုလံပစ်အသံလွှင့်အဖွဲ့, အထွေထွေ Atomics နှင့် ESPN တို့ပါဝင်သည်။
NAB Booth N2524 မှာကျွန်တော်တို့ကိုကွညျ့ပါ!
အကြံပြုဓာတ်ပုံကိုပက်ကျိ: Ensemble ရဲ့အသစ်ရောနှောခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ယူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဗီဒီယိုအားစတင်ပြေးလွှားလယ်ပြင်၌တစ်ခုသို့မဟုတ်စတူဒီယိုကနေပြပွဲသို့ပြောင်းရန်ဖို့ BrightEye NXT ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း Switcher ကိုအသုံးပြုကြပါစို့။ SDI နှင့် HDMI အချက်ပြမှုများကိုတွဲသုံးနိုင်ပါသည်။
2014 NAB ပြရန် Ensemble Designs HDMI အဖြစ် SDI သတင်းရင်းမြစ် ဖော်စပ်နှင့်တိုက်ရိုက် BrightEye NXT 2.0 router များ € "RG45 သို့မဟုတ် DB9 âကို TCP / IP - RS 232 2014-03-31
ယခင်: "Thrones ၏ဂိမ်း" ထူးချွန်တည်နေရာတီဗီအစီအစဉ် "Walter Mitty ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝက" အမေရိကဆုပေးပွဲ၏ 1st နှစ်ပတ်လည်တည်နေရာမန်နေဂျာများအစည်းအရုံးမှာထူးချွန်တည်နေရာ Feature ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆွတ်ခူးရရှိ
နောက်တစ်ခု: Bandito ညီအစ်ကိုများများအတွက် Post ကိုထုတ်လုပ်မှု Facilis TerraBlock turbocharged '' မြန်နှုန်းများအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူ ''